Addisuu Araggaa: ''ABO'n waraana bifa haaraan leenjisaa jira'' - BBC News Afaan Oromoo
Addisuu Araggaa: ''ABO'n waraana bifa haaraan leenjisaa jira''
Madda suuraa, Fuula feesbuukii Addisuu Araggaa
Addisuu Araggaa waajjira giddu galeessaa ODPtti hogganaan ijaarsa fi siyaasa baadiyyaa obbo Addisuu Araggaa .
ABO'n karaa nagaa qabsaa'uuf erga biyya galees godinaalee garagaraa keessatti ammoo bifa haaraan loltoota leenjisaa jira jedhan waajjira giddu galeessaa ODPtti hogganaan ijaarsa fi siyaasa baadiyyaa Obbo Addisuu Araggaa.
Mootummaa fi ABO'n Asmaraatti karaa nagaa qabsaa'uuf waliigalanis uummanni dhimmi waliigaltee isaanii ifatti beekamuu qaba jechuun gaafataa tureera.
Kana ilaalchisees Obbo Addisuu Araggaa har'a ibsa kennaniin dhimmi waliigaltee mootummaan ABO waliin taasise dhokfameera kan jedhu odeeffannoo sirrii miti jedhanii akkataa walii galleen ariitiidhaan nuuf deemaa hin jiru jedhan.
Mootummaa fi ABO'n waraana ilaachisee;
Mootummaan Waraana ABO biyya keessa jiruu fi Eertiraadhaa galu leenjisuun kaan gara humna nageenyaatti makuu kaan ammoo erga leenjii fudhatanii akkaataa fedhii isaaniitti hojiiwwan birootti bobbaasuuf deeggarsa gochuuf waliigalleera jedhan.
Waraanni Eertiraa ture erga biyya galee warri biyya keessa socho'aa turan guyyota 15 keessatti itti makamanii waliin leenjii eegalu kan jedhu waliigalle jedhu Obbo Addisuun
Ta'us guyyoota 15 eegnee waan dhufuu hin dandeenyeef warra Eertiraadhaa galan leenjii galchine jedhan.
''Waraanni kun nuufis humna gaachana'' jedhan.
'Waliigaltee mootummaafi ABO kan harkifachiise ABO dha'
Waraana biyya kessa jiru ilaalchisee koreen hundaa'ee kan hojjechaa ture yoo tahu gama mootummaan kutannoodhaan qophiin barbaachisu hundi xumurameera jedhan Obbo Addisuun.
Gama ABOdhaan garuu waraana isaanii leenjii galchuu ilaalchisee yeroo waliin mari'annu karuma nagaa walii gallus qabatamaan lafarratti garuu xumuruu hin dandeenye jedhan.
Akka jaarmiyaa siyaasichaatti hoggansi hundi waliin mari'atee karaa nagaa qabsaa'uuf waligaluun isaanii nu shakkisiisa kan jedhan Obbo Addisuun ibsi hoogansa siyaasaa ABO fi ajajaa waraana Lixaan kennamu garagara jedhan.
''Godinoota akka Gujii, Qeellam, Wallagga Lixaa, Wallagga Bahaa fi Iluu Abbaa Booraa keessatti waraana haaraa filachuun leenjisaa jiru, kun ammoo nu yaaddessa,'' jedhan Obbo Addisuu Araggaa.
Dabalataan seer-maleessumaan babal'ataa akka jiru himanii hoggantootni keenyallee ajjefamaa jiru jedhe.
Kaleessa magaala Naqamtee keessatti itti aanaa bulchaan aanaa Guuto Giddaa akka ajjeefaman himaniiru.
Ajjeechaan hooggantoota mootummaa, caasaa mootummaa diiguu, saamicha, milishaa meeshaa waraanaa hikkachiisuu fi kunneen kana fakkaatan loltoota ABOtin raawwatamaa akka jiranis dubbatan.
'Beekumsaafi dandeettii qofaan osoo hin taane lubbuu kennuuf duubatti hin deebinu'
Seenaa m/b Medikaalaa Yunvarsiitii Finfinneetti qabxii ol-aanaa galmaa'e
Gama biraatin dubbii dhaabbilee lamaan gidduu jiru furuuf koreen waloo dhaabbate karoora waliiniitin akka hojjetuf tattaaffiin godhamaa turus hanga ammaatti wanti milkaa'e akka hin jirre Obbo Addisuu Araggaa himan. Jaarsoliin biyyaa dhimmicha akka furaniif gama ODPtin tattaaffiin godhamaa akka tures dubbatan.Dhaabbileen qabsoo hidhannoorra turan seera fi heera biyyattii kabajanii akka socho'an kan jedhu dhimma dhaabbilee siyaasaa qabsoo hidhannoora turan walin irratti waliigalame dha jedhu.
Morkii caalaa wal tumsuu fi wal deeggaruun yaa hojjennu kan jedhus qaama marii dhaabbilee siyaasaa walin taasifamee ta'uusaa dubbatan.
ABO'n ammoo waliigalticha raawwachuuf mootummaatu harkifataa jira jechuun komataa tureera.
Mootummaan haamilee fi kaka'umsa dura qabuun walii galtee keenya gara hojiitti hiikuu irratti harkifataa jira jechuun ABO'n komate.